Forum serasera malagasy Loza ity!!!! - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Loza ity!!!!
gasyjean - 27/07/2013 15:37
Tsy ho asiana resa-be angamba,fa efa samy mahita sy leo ny fandehan-draharaha misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy isika rehetra.Sanatria ve tany voahozona ity misy antsika ,sa isika vahoaka malagasy voafidy manokana mba tsy hitraka mandrakizay?
Tena leo ny tenanay reolona !!tsy haiko ianareo? Dia tsy misy malagasy ve na dia iray akory aza mba manana ati-doha ,fahavononana hanao izay hahatsara kokoa ny fiainana an-davanandron'ireo madinika mpiray tanindrazana aminy?.
Tena mbola averiko eto ihany ilay soso-kevitra efa nalefako teto elaela izay
"METY SADY TSARA AMIN'NY VAHOAKA MALAGASY NY MIDITRA HO DEPARTEMENT FRANTSAY,ENY NA TSY FRANTSAY AZA FA FIRENENA HAFA IZAY MANAIKY".
Nehemiah - 27/07/2013 15:59
Izaho koa mba nanontany tena ihany : sao dia ny tutelle ary no mety an'ity vahoaka gasy ity, fa dia irresponsable loatra, pire noho ny zaza miala sakana !
Fa rehefa neritreretiko tsara ilay resaka dia tsy vahaolana azo antoka ny tutelle. Ny vahaolana dia ny fiverenana @ Jesoa Kristy : ny faharavan'ny fototra kristianin'ny fiaraha-monina no mahatonga an'izao.
gasyjean - 27/07/2013 16:33
Miala tsiny aminao aho ranamana,fa tsy haiko ianao raha anisan'ireo olom-bitsy mahazo tombony amin'izao zava-misy eto firenena izao na tamin'ireny teo aloha ireny.
Fa ny ahy ny fantatro dia izao; ny ankamaroany ny vahoaka malagasy dia mitrongy vao homana,
na eo jesosy kristy na tsy eo,ny ilaina ny vahoaka izao dia vahaolana aingana mba ahafahany miaina sy mivelona am-pifaliana sy am-piadanana amin''ity fiainana mandalo ity fa tsy hiandry ny hoe rehefa maty vao "hiaina".
Ianareo faly fotsiny manome toky fitaka ny olombelona sasany mampanantena fiainana mandrakizay azy ireo rehefa hita izao fa helo mandrakariva no iainany andavanandro.
Raha tena tsara tokoa izao jesosy kristy izao,dia midika inona ary izany hoe tsara izany aminy?i zao fiainana iainantsika izao va?...
Nehemiah - 27/07/2013 17:13
Fa inona kay no mahatonga anao hisondrotra tahak'izao ? Naninona anao i Jesoa Kristy ?
saho - 29/07/2013 22:50
Miarahaba ny Mpiray Tanindrazana rehetra,
alaivo ny tantara teo aloha nisy hatramin izay ka hatramin izao ny firenena Malagasy
raha dinihina dia miroboka Amin ny fahaizana manimba sy manaratsy ny akamaroan ny Malagasy maro isa, ravaina rehefa tsy mifanaraka ny tian ny olombitsy (ohatra ravaina izay voafidimbahoaka rehefa mivily lalana le mpitondra, direct ra8 ravaina vers rajoelina) Dia tahaka izany foana no miverimberina, ohatrany kilalao le fanaovana Politika sy fitondrana fanjakana ( ratsy iraka ravaina vers ra8)
Raha fehezina izany dia ny lalana (loi) mifehy izany rehetra izany ohatrany tsiss, misy atao hoe gadra Politika sns...izay le ataoko hoe misy fomba hafa kely hain ireo mpanao Politika malagasy, mandravarava, manimba sns...
Raha hitantara eto za hoe oharina ny tantara firenena eropeana tandrefana dia teto eoropa koa efa nisy ny fahanoanana, fanimbana, fandravana sns...izany no nahatonga ny ady nisesisesy taloha taty....saingy noho ny fandrosoana fikarohana ny fahaizana miaina dia nofonosana tao anaty lalana (loi) daholo ny fifehezana sy ny fifanajana rehetra mikasika izany fandravana, fanimbana sns...ambanin ny loi daholo na mpitondra na vahoaka entina, voatsara daholo izay tsy manaja loi, manana lanja lehibe izany loi izany na eo tantara amerikana aza
Manaraka izany dia misy etude koa nokarohina taty aoriana momba ny fialana ny fahantrana na Amerika na eropeana izay efa miseho endrika ao chine ankehitriny, ny rafitra capitaliste
io dia rafitra iray hialana ny fahantrana, mandray andraikitra manaraka ny loi sy ny manaraka ny rafitra ny mponina ao aminy, ohatra Taylorismus, izay efa niseho endrika efa fahagola tany Gasikara, "izay tsy mahay vody sobika, mahay fatambary" izany hoe efa miseho hatry ny taloha ny fahaizana fiarahamonina sy toekarena iraisampirenena teo tantara fahagola malagasy
Isika ve dia ho noana , tsy hanana hohanina, hangataka Lava....diso ianao, tany malalaka i Gasikara, tany mamokatra, aleo ho an ny daholo be ny fahaizana fa tsy olombitsy, fifanarahana eo Amin ny tsirairay ary hitambatra no ilaina, "mitabe tsy lanin ny Mamba"
Raha za no hanontanianareo hoe ahoana no hialana ny crise sns...dia avereno ny fahaizana fahagola fa ho resy ny hanoanana sy ny crise.....ny Malagasy dia manana ny kolikoly fahagola tsy tokony ariana, samia manaja ny azy dia ho voavaha ny krizy,
Fahaizana mitantana efa ohatran ny tsy misy mahafantatra intsony, avadio fitantanana fahagola anie e, tena tsy ho very ny Malagasy mpiray tanindrazana
Rehefa tsy mety ny fitantana fahagola fanovana toetsaina mandravarava sy manimba sns...dia aoka ny mahay mitantana nahita fianarana no haka andraikitra avo indrindra ary hanaparitaka sy hampianatra ireo tsy mahay, fanontaniana tokony apetraka , ahoana no hialako ity fahantrana ity, hianatra hamorona zavatra aho, hampitombo ny vokatra ho betsaka, hampitombo fahaizana manao tahiry( vokatra sakafo, vola, fahaizana manokana sns...), rehefa hainao tsara ny fandehan ny tahiry dia tsy hisy ny crise sy ny fahantrana
Sombitsombiny ihany io
jereo fa ny ntaolo taloha efa nahalala hoe "tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loaka" dia hoe misy fomba fiteny koa "indray mandeha ve Manta vary dia aza kivy"
Ny tiako lazaina dia ny toetsaina ankehitriny no efa simba, ny akamaroany, ampianaro ny zaza dia asio fetrany ny isan ny zaza rehefa tsy mahavelona
Ataovy olombanona ny fitaizana zaza sy ny ankizy, ampianaro ny zaza
Nehemiah - 30/07/2013 08:32
Matetika ny olona dia maneho ny fahendren'ny Ntaolo ho karazana "formule magique", kanefa tokony ho fantatra fa tsy zava-baovao ny fitiavan-tena, kolikoly, finiavana handrava sns fa efa talohan'ny andron-dRainilaiarivony ilay izy, hany ka malaza ny hoe "Ny vazaha mody miady, ny gasy mody mihavana".
Ny tiako iaviana dia tsy voatery ho vokatry ny fanatontoloana tsy voafehy omban'ny acculturation ihany ny zavatra mitranga ankehitriny @ lafiny toe-karena fa mety tena vokatr'ilay toe-tsaina gasy tsy voataomin'ny finoana kristiana mihitsy koa, rehefa tsy voafehin'ny mpanjana-tany intsony taorian'ny 1972.
Ny Ntaolo dia nanana ny fahendrena maha-izy azy ireo avokoa, kanefa nisy moa ny lesoka t@'ilay izy (Ny tonon'andro tsy mahalehilahy) sady tsy voatery nifanaraka @ zavatra nolazainy ny zavatra nataony sy niainany. Nanatsara an'ilay izy ny finoana kristiana rehefa nitondra sy nanamafy ny fiheveran'ny reddition de comptes @'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka, sady nampahafantatra an'Andriamanitra @ maha-Persôna Masi-Mandidy Azy fa tsy karazana Zavamananaina any alavitra be any izay tsy tena takatr'iza na iza afa-tsy ny razana.
Tsy milaza aho tsy akory fa ratsy ny hevitra avoitrao, tsara ilay izy, tokony miverina @ fahendrena isika, fa tsy ilay fahendren'ny Ntaolo taloha en soi no vahaolana fa fahendren'ny Ntaolo notaomin'ny finoana kristiana tena izy tsy miharoharo.
voromailala - 02/08/2013 09:20
Nahaliana ahy ilay adihevitra dia mba handray anjara kely aho.
Miombokevitra amin'i gasyjean, noana ny vahoaka malagasy, io no sarobidy aminy indrindra izao,
na hitorianao fitiavana, tenin'Andriamanitra eo aza izy ireo, mbola ho noana foana,ary ianao indray azany no mety hotorahany vato.
Inona no nahatonga ny Malgasy ohatra zao?
Raha ny fikarohana hitako dia tamin'ny hanjanaka an'i gasikara ny frantsay tamin'ny voalohany nisafidy hiaraka hiasa tamin'ny tanindrana izy reo satria hitany fa somary fetsifetsy ny merina.
Hitan'izy ireo anefa taty aoriana fa ela kokoa ny fampianarana an'ireo tanindrana dia nanampakevitra ihany izy ireo fa merina indray no hiarahana miasa.
Rehefa ahazo fahaleovantena anefa ny Malagasy izay efa nomanin-dry zareo (tsy ny tolona no nanomezandry zareo fahaleovantena fa efa plan efa hatry ny ela, satria raha tsy nomena fahaleovantena ireo firenena afrikanina maromaro tamin'ny 1960 dia lasa ny Frantsay mainty betsaka noho ny Frantsay fotsy) dia natahotra izy ireo hoe raha merina no mitondra eo dia mety fetsifetsy ireo tsy azo baikoina intsony.
Dia teo no nitsangana ny PADESMA, fikambanan'ny tanindrana sy Merina Mainty, ka izy ireo no novolavolain'ny Frantsay hitondra ny firenena.
i Tsiranana no voalohany tamin'izany, dia diniho tsara fa padesma daholo no filoha tany madagasikara afatry Ravalomanana. Hitan'i Tsiranana anefa taty aoriana fa toa saribakoly fotsiny izy, dia teo no niteraka ny korontana 1972.
Anjaranao dia manohy azy hatramin'izao fotoana izao.....
Nehemiah - 02/08/2013 09:29
voromailala na hitorianao fitiavana, tenin'Andriamanitra eo aza izy ireo, mbola ho noana foana,ary ianao indray azany no mety hotorahany vato.
Voalohany, fomba fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny manome sakafo maimaim-poana.
Manaraka, raha mieritreritra ianao fa tsy hitory ny tenin'Andriamanitra ny kristiana satria matahotra ny ho voatoraka vato dia diso tanteraka
voromailala - 02/08/2013 09:50
Nehemiah> raha azoko ny tianao lazaina dia hoe "tsy ny sakafo ihany no mahavelona fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa"?
Izaho manokana aloha aleoko zaraiko sakafo aloha ireo malagasy noana dia rehefa voky izy vao toriako ny tenin'Andriamanitra e.
Nehemiah - 02/08/2013 09:54
Izay mihitsy no tiako tenenina
voromailala - 02/08/2013 09:57
Nehemiah> Tena mahafinaritra raha izay mihintsy no tianao tenenina.